Sendikàn’ny Ala : « Tsy hita ny andramena 5.000 » | NewsMada
Sendikàn’ny Ala : « Tsy hita ny andramena 5.000 »
Nilaza ny mpikambana ao amin’ny Sendikàn’ny teknisianina amin’ny ala (Scofafor) fa nahitana fandikàn-dalàna maro ny fomba fanisana nataon’ny fanjakana sy ny minisiteran’ny Tontolo iainana sy ny ala ireo tahiry andramena. Nokianin’izy fa tokony ho natao ny fanaraha-maso sy ny fampitahana ny fandraisana an-tsoratra (PV) ny tahiry andramena nogiazana (saisis) miohatra amin’ny vosoratra (PV de sequestre).
Araka ny nambaran’ny sendikàn’ny Ala, nahatratra 210 ny PV-n’ny hazo nogiazana. Raha atao ny fampitahana, nahatratra 32.489 ny bolabola andramena voaisa, nefa nolazain’ny minisitry ny Tontolo iainana, ny herinandro lasa teo fa 27.725 ny isan’ny tahiry. Midika izany, amin’ity sendikà ity, fa nisy bolabola maherin’ny 5.000 very. Azo atao tsara ny mitady ny tompon’andraikitra sy ny nahavery ireo bolabola tsy hita ireo, anontaniana ny mpiandry ny tahiry, nivoahan’ny hazo. Saingy, tsy azo atao intsony izany ankehitriny, satria efa nafangaron’ny fanjakana sy ny tompon’andraikitra vitsivitsy.
Mitaky ny volany ny mpiasan’ny ala
Tondroin’izy ireo ho anisan’izany ny miaramila jeneraly iray sy tompon’andraikim-panjakana iray, samy tsy manana fahefana hanadihady satria tsy manana ny sata araky ny lalàna na “Officier de police judiciare” (OPJ) satria misy ny dingana natao. Fanadihadiana nataon’ny mpandray an-tsoratra (verbalisateur) teny anivon’ny mpiandry ny tahiry ary ny teny amin’ny Vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana.
Nilaza koa ity sendikà ity fa misy tambin-karama omena ny mpiasan’ny ala manao fanadihadiana sy ny mpiandry ny tahiry ary misy mankany amin’ny Vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana. Tsy nisy nahazo anefa izy ireo, ka takin’ny sendikà ny handoavan’ny fanjakana izany. Tsy hanaiky izy ireo ary tsy hipetra-pontsiny fa hanenjika araka ny dingana ara-panjakana samihafa.
Amin’izy ireo, “fanahy niniana natao ny nampifangaroana ireo tahiry ireo. Azo antoka fa efa tsy eto Madagasikara intsony ireo bolabola 5.000 tsy hita ireo”.